Cabo Verde ụgbọ elu na-ekwupụta ụgbọ elu nke abụọ kwa izu na Boston
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Cabo Verde ụgbọ elu na-ekwupụta ụgbọ elu nke abụọ kwa izu na Boston
Airlines • Airport • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Cabo Verde na -agbasa • News • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA • Akụkọ dị iche iche
Cabo Verde ụgbọ elu, Onye na-ebu ọkọlọtọ ikuku nke Republic of Cabo Verde, ga-agbakwunye ụgbọ elu nke abụọ n'etiti Cabo Verde na Boston na Disemba.
Site na Disemba 14, Cabo Verde Airlines ga-ebido ife ugbo elu abuo n’izu uka na Boston, na Tuesday na Saturday. Na Tuesday, njikọ dị n’etiti Amílcar Cabral International Airport (SID), na Sal Island, ga-apụ na elekere 10:00 nke ụtụtụ, wee rute na Logan International Airport na 14:10 PM. Nlaghachi azụ ga-ahapụ Boston na 15: 40 Obodo Oge wee rute na Nelson Mandela International Airport (RAI), na Praia, na 03: 10 AM oge mpaghara. Na Satọde, ụgbọ elu ahụ ga-ahapụ Praia na 03: 00 AM wee rute na Boston na 07: 10 oge mpaghara, wee laghachi Sal Island, na-apụ BOS na 08: 10 AM, wee rute Sal Island na 19:40 PM.
A ga-ejikọ njikọ a na B757-200, yana oche 22 na kasi obi, yana oche 161 na klaasị Economy.
Emepụtara atụmatụ ọhụrụ a na Satọdee, Nọvemba 16, nke Mário Chaves, osote onye isi na Chief of Corporate Afairs nke CVA, na nnọkọ ogbako emere na Consulate General nke Cabo Verde na Boston.
Boston Logan International Airport bụ otu n'ime ndị na-ekwo ekwo na USA, nke nwere nde ndị njem 40.9 na-arụ ọrụ na 2018. Ebe Boston nwere nnukwu obodo Cape Verdean, obodo ahụ nwere ọrụ dị mkpa na atụmatụ mgbasawanye atụmatụ Cabo Verde Airlines na North America.
Ugbu a na-efe efe site na Boston ruo Praia (Cabo Verde) na Mọnde, CVA chọrọ ịbawanye òkè ya n'ahịa maka ndị America na-eleta Africa yana ndị Africa nọ na United States of America.
Nke a ga - ekwe omume site na CVA nke dị na Sal Island, site na ebe ụgbọ elu na-efega na Cape Verde ndị ọzọ yana obodo ndị dị na West Africa, dị ka Dakar na Lagos, Nigeria, ọrụ ọhụrụ ga - amalite na Disemba 9th na ụgbọ elu ise n’izu. Hublọ ọrụ CVA na-enyekwa ụgbọ elu na Lisbon (ugboro ise n'izu), Milan (ugboro anọ n'izu) Paris na Rome (ugboro atọ n'izu), yana ebe ndị Brazil na-aga.
Na mbido afọ a, ụlọ ọrụ ahụ ekwuputala na ọ ga-amalite isi na Sal Island gawa Washington DC na Disemba, ugboro atọ n’izu.
Mário Chaves, osote onye isi na Chief nke Coporate Affairs, kwuru, sị: “flightgbọ elu nke abụọ na Boston weghachite njikọ dị oke mkpa nke belatala site na nhazigharị CVA. Obi dị anyị ezigbo ụtọ iweghachi njikọ a na Cape Verdeans na-agbasasị ma anyị nwere olile anya, site na ọrụ ọhụrụ a, na anyị nwere ike ịga n'ihu na-abawanye njem nleta na Cabo Verde ma nye ndị America ohere ịmara ọdịbendị Cabo Verde na ndị ya nke ọma ".